Sheekh Jamac C/Salaan oo ka mid ahaa Hay’addii Culimada Musaalaxada oo Muqdisho ka bilaabay muxaadarooyin ka dhan ah Dastuurada ay dejistaan Wadamada Reer Galbeedka sida kan TFG “Warbixin”. | Halganka Online
Sheekh Jamac C/Salaan oo ka mid ahaa Hay’addii Culimada Musaalaxada oo Muqdisho ka bilaabay muxaadarooyin ka dhan ah Dastuurada ay dejistaan Wadamada Reer Galbeedka sida kan TFG “Warbixin”.
Markazka Salaaxudiin ee degmada Huriwaa ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalin walba oo Jimcaha ah ka dhaca Muxaadarooyin muhiim ah oo ay soo jeediyaan mashaa’ikh Soomaaliyeed oo isku xilqaamay in ay Shacabka Muslimiinta ah diinta baraan.
Salaaxudiin waa Markaz dhismay xiligii ay soo bexeen Maxkamadihii Islaamka Soomaaliya waxaana Markazkaasi ka aflaxay Arday farabadan oo ka dhax muuqda fagaaraha Jihaadka Soomaaliya qaarkoodna uu Allaah ku Arzuqay Shuhado.
Markii ugu horaysey waxaa Markazkaasi Muxaadaro ka jeediyay Shiikh ka mid ahaa culimadii la baxday Hay’adda culimada ee mar isku dayey in ay sharciyeeyaan joogitaanka ciidanka AMISOM in Dowladda KMG ah oo ay Mujaaihidiintu la dagaashanyihiin.
Sheekh Jaamac C/salaam oo ka baxay hay’addii culimada Musaalaxada ayaa Muqdisho ka wada dadaallo uu ku gudanayo waajibkiisa daacinimo isagoona bilaabay in uu Jeediyo Muxaadarooyin ka hadlaya wadciga maanta ka jira caalamka islaamka.
Muxaadaro ciwaankeedu ahaa “Lagdanka u dhexeeya Xaqqa iyo Baadilka” ayuu Sheekhu shalay ka jeediyay Markazka Salaaxudiin muxaadaradaas oo ay ka faa’iidaysteen dad badan u soo cilmi doontay Markazka.
Sheekha ayaa ka sheekeeyay Jiha wareerinta Dowlada KMG ah ay dadka caamada ah ku jiha wareeriso in ay qaadatay ku dhaqanka Shareecada Islaamka xilli Sheekh qudhiisa uu ka mid ahaa Dadkii ay Dowlada KMG ah Beenta u sheegtay.
Wuxuu faah faahin ka bixiyay sida ay isku waafaqi karaan Darstuurkii Naabilyoon,Mbagati Doofaareey iyo kan Alle oo ay dowladda KMG ah ku beer laxawsato taageerayaasheeda, Sheekh Sheekh Jaamac C/salaam wuxuu kaaf iyo kala dheeri ku sheegay in laysla meel dhigo Dastuurka alle iyo kan Gaalada ee ku dhisan Ajandayaasha Q.Midoobe.
“Maalin aan joogay meel isku imaatin sidaan oo kale ah ayuu ninkii meesha gudoomiyaha ka ahaa yiri war in shareecada Islaamka dalka lagu dhaqo diyaar ma utihiin, markaas ayay dadkii meesha fadhiyey oo dhan gacanta taageen oo dheheen Haa Haaa ,Ninkii gudoomiyaha meesha ka ahaa ayaa yiri,dowlada waa islaami waxaan dejin doonaa Dastuur la jaan qaadi kara shareecada Islaamka, Subxaanalaah ku dhaqanka shareecada islaamka miyaa dood lagelanayaa” ayuu yiri Sheekh Jaamac C/salaam.
Sheekha ayaa intaas ku daray in Daaghuut-ka uu ku badanyahay dowladaha sheegta caalamka Islaamka ciddii u xukuntantana wax aan ka ahayn kitaabka alle ay tahay “Riddo” ka baxday diinta Islaamka.
Kheyr allaha siiyee Sheekh Jaamac C/salaam oo ka baxay Culima iska yeel yeelkii Shariifka ayaa hadda wada Baraarujin uu cilmigiisa ugu faa’iidaynayo Shacabka Muslimiinta ah, weli waxaa jira culimo badan oo weli u fatwooda dowlada Shariifka sida Bashiir Salaad iyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo larumaysanyahay in Zallo weyn ka dhacday.
« Dowlada KMG ah oo soo bandhigtay ciidan ay ku sheegtay in ay Xisbul Islaami ka soo goosteen. Max’med Caruus “majiro ciidan ka tirsan Xisbul Islaam oo kooxda Riddada isku dhiibay iyaga ayaa jabay oo kala carar ah sidee Mujaahid Riddo ugu biiraa”. »